Gorsa Hanbaa hin qabne | Oromia Shall be Free
bilisummaa 4 weeks ago	Comments Off on Gorsa Hanbaa hin qabne
Dhiirti haqaa akkatti dirree baaftee dhugaa jiru lafa keessi.
Karaa Oromoon irra deemuun barbaachisu ummatatti garsiifti.
Dargaan gola keessatti dahattee odoo waan dubbatame sirrtitti dhaggeeyfattee hin hubatin, mancaa fi bordoo gurrattee dhukkee kaafti. Kun Oromoo gar tokkoon hin gayu!!
Previous Dr. Ittanaa Habtee, “Jawaar Mohamed Abiyyi waliin qaamaan wal arge mariyatee jira”
Next Jawaar Mohamed: “Oromoo nama na qeequuf jettanii wal hin fixina”